Sary avy ao Kiobà mandritra ny fihibohana · Global Voices teny Malagasy
Sary nandritra ny fihibohana tao Kiobà
Voadika ny 27 Aogositra 2020 13:09 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Deutsch, русский, Ελληνικά, عربي, polski, Français, bahasa Indonesia, 日本語, Қазақша, українська, Esperanto , Português, Español
Mameno fitoniana sy hery ho ahy ny fiverenako eny an-dranomasina (Sary: Josué Corujo).
Tao amin'ny Periodismo de Barrio ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany ary naverina nokiraina sy navoaka ho an'ny Global Voices. Ato ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra niaingàna.
Ny 23 Jona, nandefa antso ny Sampan-draharaha Fampitam-baovao elTOQUE sy ny Periodismo de Barrio mba hikarakaràna Atrikasa ety anaty aterineto ho an'ny asa fakàna sary “Ny Aorian'ny Aprily”, ka tanjona amin'izany ny handrakitra, amin'ny fomba feno fahaizamamorona, ireo andro nihibohana nandritra ny COVID-19.
Nanomboka tamin'ny faran'ny Martsa, niditra tamin'ny fihibohana amin'ny ampahany i Kiobà, izay malahelo ireo olona 91 matin'ny COVID-19, ary avy eo dia nohavaoziny tsikelikely izany hatramin'ny 20 Jolay. Tamin'ny Aogositra, rehefa nirongatra indray tao La Havane ny valanaretina, nakaton'i Kiobà ireo torapasika, toerana fisakafoanana, toerana fisotroana, ary noraràny ny sidina iraisampirenena.
Tao amin'ilay atrikasa, sarin'endrika, sarin'ny tontolo manodidina sy ireo lafin-drindrina andavanandro no isan'ireo sary tena nanamarika ny fahatsiarovan'ireo mpandray anjara.
Efa ho nandritra ny volana iray, nifakalo fahaizamanao sy fahalalàna momba ny fakàna sary ireo tanora kiobàna. Noho ny fisian'ny tambajotra sôsialy sy ny vondrona iray ao amin'ny Telegram, nanangana vondrompiarahamonina iray ry zareo, ahitàna olona manodidina ny 70 eo ho eo, izay miaraka mampianatra sy mianatra, no sady mifampizara hatrany ireo sary sy ny traikefany.
Na dia efa nifarana tamin'ny fomba ofisialy aza ny fepotoana nanaovana ilay atrikasa, mbola mavitrika ao amin'ny Telegram kosa ilay vondrona Después de Abril (Ny aorian'ny Aprily). Hatreto aloha, manodidina ny 570 eo ireo sary nozaraina ary 45 tamin'ireo no nalefa ho an'ilay antso.
Ao anatin'ity ampahana fampirantiana sary ity, 13 tamin'ireo 24 nandrafitra ny fantina farany no avoakanay.
Tanora iray miaraka amin'ny arotava misy soratra iray milaza ny COVID, toy ny hoe anarana marika malaza (Sary: Randy B.).
Tao anatin'izao krizy COVID-19 izao, nahita ireto anjely ireto aho. Noho ny fahasimbany dia toy ny misy ranomaso mirotsaka (Sary: Raimel Fernández).
Nandritra ny fihibohana dia nandramako ny naka sary ‘colibri’ iray. Rehefa azoko ilay sary, nahataitra ahy ny fomba fiasan'ny natiora, mivoaka amin'izay fanaon'ny olombelona (Sary: Randy B.).
Mbola zaza izy no efa nianatra azy ity, dia io izy mbola mahatadidy io (Sary: Roger TM).
Mahafaly ahy ny manolotra ny renibeko. Fanomezana gaovana ny nanànako azy teo anilako foana nandritra ireo volana vitsivitsy ireo (Sary: Josué Corujo).
Rehefa tsy afaka nikarenjy tany ambanivohitra aho, dia ny natiora no nisafidy hamangy ahy (Sary: Gabriela Molina).
Henjana ho an'ireo izay tsy mba afaka nitazatazana avy any am-baravarankeliny ireo volana maro nihibohana. Na angamba izany no tao an-tsaintsika (Sary: Amarilis Magaña).
Tafatafa. Isaky ny fiandohana sy ny fiafaran'ny tontolo andro (Sary: Roger TM).
Rehefa mihidy an-trano dia mazàna no mihevitra toy ny hoe mitazana ao anaty lavadrano tsy hita fiafaràna (Sary: Gabriela Molina).
Tao amin'ny zaridaina japoney, mbola ireo mpinamana hatrizay tia mandehandeha foana izahay, (Foto: Luisma del Valle).
Sary an'ny tena manokana ity, satria sarin'ny tongotr'ilay sipakeliko io. Niezaka naka tàhaka ny orana izahay (rano atsifotra amin'ny fantsona) ary ny sary dia fanehoana ihany : ny famindrany sy ny fijeriko avy ato aoriany mandrakariva, na toy inona na toy inona hasarotry ny fiainana (Sary: Randy B.).
Ny lokon'ny fodiamasoandro, saingy sary tsy miloko (Sary: Roger TM).
Ady & Fifandirana 13 Avrily 2022